Banaan bax lagu taageerayo maamulka Jubaland loogana soo horjeedo DFS oo Kismayo ka dhacay – SBC
Banaan bax lagu taageerayo maamulka Jubaland loogana soo horjeedo DFS oo Kismayo ka dhacay
Posted by Webmaster on May 26, 2013 Comments
Banaan bax balaaran oo loogaga soo horjeeday dowlada federaalka Soomaaliya laguna taageerayo Maamulka Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta gelinkii hore ilaa iyo iminka ka soconaya magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose.
Kumanaan dadweyne oo ka kala yimid xaafadaha Magaalada Kismaayo oo weyn iyo yarba leh ayaa waxa ay ku banaan baxayaan waddooyinka waaweyn ee magaaladaas, waxayna ku dhawaaqayaan ereyo taageero buuxda u ah Madaxweyne Axmed Madoobe.
Waxay dadkani gacmaha ku wadaan boorar ay ku xardhan yihiin qoraalo loogaga soo horjeedo dowlada federaalka Soomaaliya iyo sida ay u aragtay Maamulka Jubaland, waxaana ka mid ah sidoo kale waxyaabaha ay wataan calanka Maamulka Jubaland iyo kan Soomaaliyeed.
Afhayeenka Kismaayo ayaa waxa uu saxaafada u sheegay in banaanbaxan uu yahay mid nabadeed islaamarkaana shacabka gobolka ku muujinayaan taageerada ay u hayaan Maamul goboleedka Jubaland.
Maalin nimadii shalay ayay aheyd markii Madaxweynaha Jubaland uu saxaafada ka iclaamiyay banaan baxan shacabka gobolku ku cabiri karaan fegrada ay ka heystaan maamulkiisa .
SBC International Kismayo